Zavatra tsy fantatrao momba ilay mpanao sary hosodoko espaniola tsara Pablo Picasso | Famoronana an-tserasera
Ny fiainan'ilay mpanao hosodoko maranitra avy any Malaga Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), noheverina ho rain'ny cubism miaraka amin'i George Braque, feno fahalianana.
Ny sary hosodoko, ekena eran'izao tontolo izao, dia anisan'ny sarobidy indrindra teo amin'ny tantara. Hahafantatra ny sasany amin'ireo zava-misy mahaliana etsy ambany isika.
1 Ny sangan'asany voalohany dia nanana fomba hafa tanteraka
2 Niala tao amin'ny Akademia kanto
3 Tao amin'ny labiera no nanaovany ny seho voalohany nataony
4 Izy no nanao ny lamba kanosa lehibe voalohany nataony tamin'ny taona 15
5 Izaho dia nandoko ny endri-tsoratra teo amin'ny moron'ny fiarahamonina
6 Nampangain'izy ireo ho nangalatra an'i Mona Lisa izy
7 Namorona cubism tamin'ny fifaninanana niaraka tamin'i Matisse izy
8 Ireo tovovavy ao Avignon, sary hosodoko cubist voalohany
9 Ny sary hosodoko dia anisan'ny sarobidy indrindra amin'ny tantara
Ny sangan'asany voalohany dia nanana fomba hafa tanteraka
Ny sanganasan'i Picasso voalohany dia tsy nisy ifandraisany tamin'ny fomba Cubist. Tao amin'izy ireo dia nitady fampisehoana zava-misy mahatoky kokoa izy tamin'ny fampiasana ny fomba fijery. Nanana fotoana fanandramana maromaro izy, izay nanandrana teknika samihafa ary nitaona ny hetsika teo aloha. Ohatra iray amin'ireo vanim-potoana ireo ny vanim-potoana manga (Ny sary hosodoko dia nahazo an'io tonony io, fotoana nahakivy teo amin'ny fiainany, iray amin'ireo antony ny fahaverezan'ny sakaizany Casagemas), fitaom-pihetseham-po.
Aorian'io vanim-potoana io dia miresaka isika mavokely, rehefa nifindra hipetraka tao amin'ny manodidina bohemian Montmartre any Paris izy ary nanolo-tena ho an'ny olo-malaza hoso-doko, nanodina ny sary hosodoko tamin'ny loko manga ho loko mavokely kokoa.
Niala tao amin'ny Akademia kanto
Picasso, izay nandany ny fahazazany tany Barcelona, ​​taorian'ny nifindrany tany Madrid hanombohana ny fianarany tao amin'ny akademia kanto malaza, ny Academia San Fernando, dia nandao azy ireo, amin'ny alàlan'ny tsy mifanaraka amin'ny filamatra maoderina azy ireo.
Tao amin'ny labiera no nanaovany ny seho voalohany nataony
Els Quatre Gats dia mpamokatra labiera malaza any Barcelona amin'ireo bohemia moderista. Tao no nanaovan'i Picasso fampirantiana irery voalohany.
Izy no nanao ny lamba kanosa lehibe voalohany nataony tamin'ny taona 15
Tamin'ny fahazazany voalohany dia nandoko i Picasso, ary tsy nijanona mihitsy, namorona lamba firakotra lehibe tamin'ny faha-15 taonany, nantsoina Ny kômonio voalohany.
Izaho dia nandoko ny endri-tsoratra teo amin'ny moron'ny fiarahamonina
Picasso dia nanameloka tamin'ny alàlan'ny sary hosodoko ny toe-javatra nisy olona marginal teo amin'ny fiarahamonina, nampiharihary azy ireo. Manasongadina ihany koa ny fisehoana ny tarehin-tsoratra avy amin'ny sirkus sy ny fialamboly.
Nampangain'izy ireo ho nangalatra an'i Mona Lisa izy
Nampangaina ho nangalatra an'i Mona Lisa an'i Leonardo de Vinci tao amin'ny tranombakoka Louvre izy, niaraka tamin'i Apollinaire namany. Navotsotra izy roa lahy, rehefa fantatra ny mombamomba ilay tena mpangalatra, mpiasan'ny tranom-bakoka.
Namorona cubism tamin'ny fifaninanana niaraka tamin'i Matisse izy
Afisy 457PMALAGA 3.
Matisse dia fandrahonana ho an'i Picasso tamin'izany fotoana izany, nekena ho toy ny manavao endrika indrindra ary iray amin'ireo mpanao hosodoko tsara indrindra. Voataonan'i Cézanne, ary te hiavaka amin'i Matisse, Heveriko fa Ireo tovovavy ao Avignon, manohitra ny lalàna rehetra amin'ny fomba fijery manjaka ankehitriny.
Ireo tovovavy ao Avignon, sary hosodoko cubist voalohany
Ity sary hosodoko ity dia maneho mpivaro-tena dimy avy amin'ny araben'i Avignon any Barcelona, ​​fa tsy avy amin'ny tanàna tsara tarehy any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa, araka ny inoan'ny maro. Ao anatin'izany i Picasso dia mandoko azy ireo amin'ny fomba roa, ahena ho andiana triangles sy rhombus, miaraka amin'ny antsipiriany tsy misy. Hatramin'izao dia te-hamerina am-pahatokiana ny zava-misy ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba fijery. Picasso tapaka amin'izany rehetra izany mampiseho aminay ny sarimiaina misolo tena amin'ny fomba fijery samihafa, izy rehetra dia voatanisa amin'ny asa tokana. Noho izany, ny endrik-tarehiny dia fitambaran'ny zoro isan-karazany, toy ny ahitantsika azy ireo amin'ny mombamomba marobe. Ny hafatra ao amin'ny sary hosodoko dia milaza ny toe-javatra misy ny mpivaro-tena.
Manatevin-daharana ny fomba fijerin'i Picasso i George Braque, mitondra ny singa rehetra amin'ny sanganasany ho eo aloha, ary koa fomba fijery manahirana ary mampiasa endrika geometrika. Teraka ny Cubism.
Ny fampivoarana ny sary (efa nisy ny fanehoana ny zava-misy marina, ilaina ny mitady zavatra mihoatra ny varavarankely amin'ny sary) sy ny psychoanalysis (mitady fahatsapana lalina kokoa ny tena zava-misy), dia fitaomana lehibe amin'ny Cubism, izay, ankoatry ny hanokatra ny tenantsika amin'ny fomba fijery vaovao, ilaina ny famakafakana ireo sanganasa hahatakarana azy ireo (Noho io antony io dia matetika no niaraka tamina lahatsoratra manazava).
Ny sary hosodoko dia anisan'ny sarobidy indrindra amin'ny tantara
Ny vidin'ny sary hosodoko Picasso amin'ny lavanty dia mahatratra fetra tsy ampoizina, iray amin'ny lafo indrindra amin'ny tantaran'ny kanto manontolo.
Ary ho anao, inona no zavatra mahaliana indrindra amin'ny fiainan'ity mpanakanto mahafinaritra ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Zavatra tsy fantatrao momba ilay mpanao sary hosodoko espaniola lehibe Pablo Picasso